EZCoin စျေး - အွန်လိုင်း EZC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို EZCoin (EZC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ EZCoin (EZC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ EZCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ EZCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
EZCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
EZCoinEZC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.629EZCoinEZC သို့ ယူရိုEUR€0.534EZCoinEZC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.482EZCoinEZC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.574EZCoinEZC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr5.7EZCoinEZC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.3.98EZCoinEZC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč14.04EZCoinEZC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł2.36EZCoinEZC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.842EZCoinEZC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.879EZCoinEZC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$14.08EZCoinEZC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$4.87EZCoinEZC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$3.42EZCoinEZC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹47.14EZCoinEZC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.106.03EZCoinEZC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.863EZCoinEZC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.953EZCoinEZC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿19.62EZCoinEZC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥4.38EZCoinEZC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥66.57EZCoinEZC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩747.44EZCoinEZC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦241.4EZCoinEZC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽46.33EZCoinEZC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴17.43
EZCoinEZC သို့ BitcoinBTC0.00005 EZCoinEZC သို့ EthereumETH0.00162 EZCoinEZC သို့ LitecoinLTC0.0111 EZCoinEZC သို့ DigitalCashDASH0.00642 EZCoinEZC သို့ MoneroXMR0.00674 EZCoinEZC သို့ NxtNXT46 EZCoinEZC သို့ Ethereum ClassicETC0.091 EZCoinEZC သို့ DogecoinDOGE185.59 EZCoinEZC သို့ ZCashZEC0.00682 EZCoinEZC သို့ BitsharesBTS24.14 EZCoinEZC သို့ DigiByteDGB21.6 EZCoinEZC သို့ RippleXRP2.18 EZCoinEZC သို့ BitcoinDarkBTCD0.0214 EZCoinEZC သို့ PeerCoinPPC2.05 EZCoinEZC သို့ CraigsCoinCRAIG283.29 EZCoinEZC သို့ BitstakeXBS26.52 EZCoinEZC သို့ PayCoinXPY10.85 EZCoinEZC သို့ ProsperCoinPRC78 EZCoinEZC သို့ YbCoinYBC0.000334 EZCoinEZC သို့ DarkKushDANK199.36 EZCoinEZC သို့ GiveCoinGIVE1345.65 EZCoinEZC သို့ KoboCoinKOBO141.31 EZCoinEZC သို့ DarkTokenDT0.579 EZCoinEZC သို့ CETUS CoinCETI1794.05